ဒီနွေရာသီမှာ ယောင်းကို ဟော့ဖြစ်နေစေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?? - For her Myanmar
လန်းချင်တိုင်း လန်းလို့ရအောင် ဒီနှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေ ရှိဖို့လိုနေပြီနော်…
ယောင်းတို့ရေ… Stella တို့လို အလှကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံး မိတ်ကပ်မပါရင်တောင်မှ နှုတ်ခမ်းနီလေးတော့ ဆိုးဖြစ်အောင် ဆိုးတတ်ကြတာမျိုးလေ… နှုတ်ခမ်းနီများမပါရင် ဖြူဖျော့ဖျော့နဲ့ လူမမာရုပ် ပေါက်နေသလိုလိုတောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်တာ။ တစ်ခုခုစားရင်လည်း နှုတ်ခမ်းနီ မပျက်အောင် စားရတာနဲ့၊ စားပြီးတိုင်းလည်း ပြန်ဆိုးရတာနဲ့ ဆိုဒလို.. 😛
အရောင်စုံ အမျိုးအစားစုံ ဝယ်ထားပြီးသား ရှိတာတောင် တွေ့ရင်မြင်ရင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ထပ်ဝယ်မိပြန်တယ်။ Stella လို နှုတ်ခမ်းနီကြိုက်တဲ့ ယောင်းတွေ ရှိကြတယ်ဟုတ်? ဒါဆို ယောင်းတို့အတွက် ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ ခေတ်စားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေကို တူတူကြည့်ရအောင်နော်…
အသားညိုတဲ့ ယောင်းလေးတွေ တော်တော်များများ တွေးတတ်ကြတာက အသားညိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ရွေးတယ်ပေါ့။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အသားညိုတဲ့ ယောင်းတွေက ဘာနှုတ်ခမ်းနီအရောင်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်ပါတယ်လို့… ဒီနွေရာသီမှာ ယောင်းတို့အတွက် ဖြစ်နေမယ့် အရောင်တွေကတော့ ပန်းရောင်တောက်တောက်၊ လိမ္မော်နီရောင်နဲ့ ဘယ်ရီသီးရောင်ရင့်ရင့်တွေပါ။
Stella တို့ အာရှသူအများစုက အသားဝါကြတာများပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရွှေရောင်ရှိကြတယ်ပေါ့။ ဒီလို အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် လိမ္မော်ရောင်၊အနီရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်တောက်တောက်တွေက ဒီနွေရာသီမှာ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။
Related article >>> ရွှေအိုရောင် အသားအရေပိုင်ရှင်တို့နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီ (၆) မျိုး
အသားဖြူတဲ့ယောင်းတွေကတော့ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ရွေးချယ်စရာ များကြပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဒီနွေရာသီမှာ ယောင်းနဲ့ လိုက်ဖက်မှု အရှိဆုံးကတော့ ပန်းဆီရောင်၊ လာဗန်ဒါရောင်လို ခရမ်းဖျော့ဖျော့နဲ့ သန္တာရောင်တွေပါတဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
Related article >>> ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီ
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ဒီနွေရာသီမှာ ဘယ်နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေက ရေပန်းစားလာနိုင်ပြီး ယောင်းနဲ့ ဘယ်အရောင်က အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲ သိကြပြီပေါ့နော်။
ဒါဆိုရင် Stellaက နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ယောင်းတို့အားလုံး မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး အကုန်လုံးနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အရာတစ်ခုပြောပြပေးမယ်နော်.. အဲဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးက အလှဆုံးမို့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ လန်းနိုင်ကြပါစေလို့…
လနျးခငျြတိုငျး လနျးလို့ရအောငျ ဒီနှုတျခမျးနီအရောငျတှေ ရှိဖို့လိုနပွေီနျော…
ယောငျးတို့ရေ… Stella တို့လို အလှကွိုကျတဲ့ မိနျးကလေးတှမှော အကငျြ့တဈခုရှိတယျ။ မကျြနှာတဈခုလုံး မိတျကပျမပါရငျတောငျမှ နှုတျခမျးနီလေးတော့ ဆိုးဖွဈအောငျ ဆိုးတတျကွတာမြိုးလေ… နှုတျခမျးနီမြားမပါရငျ ဖွူဖြော့ဖြော့နဲ့ လူမမာရုပျ ပေါကျနသေလိုလိုတောငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထငျတာ။ တဈခုခုစားရငျလညျး နှုတျခမျးနီ မပကျြအောငျ စားရတာနဲ့၊ စားပွီးတိုငျးလညျး ပွနျဆိုးရတာနဲ့ ဟုတျတယျဟုတျ?
အရောငျစုံ အမြိုးအစားစုံ ဝယျထားပွီးသား ရှိတာတောငျ တှရေ့ငျမွငျရငျ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ထပျဝယျမိပွနျတယျ။ Stella လို နှုတျခမျးနီကွိုကျတဲ့ ယောငျးတှေ ရှိကွတယျဟုတျ? ဒါဆို ယောငျးတို့အတှကျ ဒီနှဈနှရောသီမှာ ခတျေစားလာမယျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျတှကေို တူတူကွညျ့ရအောငျနျော…
အသားညိုတဲ့ယောငျးတှအေတှကျအသားညိုတဲ့ ယောငျးလေးတှေ တျောတျောမြားမြား တှေးတတျကွတာက အသားညိုတော့ နှုတျခမျးနီအရောငျရှေးတယျပေါ့။ တကယျတော့ မဟုတျပါဘူးနျော။ အသားညိုတဲ့ ယောငျးတှကေ ဘာနှုတျခမျးနီအရောငျနဲ့ ဖွဈဖွဈ လိုကျဖကျပါတယျလို့… ဒီနှရောသီမှာ ယောငျးတို့အတှကျ ဖွဈနမေယျ့ အရောငျတှကေတော့ ပနျးရောငျတောကျတောကျ၊ လိမ်မျောနီရောငျနဲ့ ဘယျရီသီးရောငျရငျ့ရငျ့တှပေါ။
ရှအေိုရောငျ အသားအရပေိုငျရှငျတှအေတှကျStella တို့ အာရှသူအမြားစုက အသားဝါကွတာမြားပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ရှရေောငျရှိကွတယျပေါ့။ ဒီလို အသားအရပေိုငျရှငျတှအေတှကျ လိမ်မျောရောငျ၊အနီရောငျနဲ့ ခရမျးရောငျတောကျတောကျတှကေ ဒီနှရောသီမှာ အလိုကျဖကျဆုံးပါပဲ။
Related article >>> ရှအေိုရောငျ အသားအရပေိုငျရှငျတို့နဲ့ အလိုကျဖကျဆုံး အသားရောငျ နှုတျခမျးနီ (၆) မြိုး
အသားဖွူတဲ့ယောငျးတို့အတှကျအသားဖွူတဲ့ယောငျးတှကေတော့ နှုတျခမျးနီနဲ့ ပတျသကျလာရငျ ရှေးခယျြစရာ မြားကွပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ ဒီနှရောသီမှာ ယောငျးနဲ့ လိုကျဖကျမှု အရှိဆုံးကတော့ ပနျးဆီရောငျ၊ လာဗနျဒါရောငျလို ခရမျးဖြော့ဖြော့နဲ့ သန်တာရောငျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Related article >>> ယုံကွညျမှုကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျတဲ့ အနီရောငျနှုတျခမျးနီ
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ဒီနှရောသီမှာ ဘယျနှုတျခမျးနီအရောငျတှကေ ရပေနျးစားလာနိုငျပွီး ယောငျးနဲ့ ဘယျအရောငျက အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈမလဲ သိကွပွီပေါ့နျော။
ဒါဆိုရငျ Stellaက နောကျဆုံးအနနေဲ့ ယောငျးတို့အားလုံး မဖွဈမနလေိုအပျပွီး အကုနျလုံးနဲ့ လိုကျဖကျမယျ့ အရာတဈခုပွောပွပေးမယျနျော.. အဲဒါကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတဲ့ မိနျးကလေးက အလှဆုံးမို့လို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု အပွညျ့နဲ့ လနျးနိုငျကွပါစလေို့…
Tags: Beauty, colors, latest, lipstick crazy, lipstick shades, lipsticks, makeup, makeup junkie, Summer, trend